रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग आठौ दिन : त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनल पुग्ने चौथो टोली ! | Cricket Himalaya |
रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग आठौ दिन : त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनल पुग्ने चौथो टोली !
By Bhanu Sigdel Last updated Jun 20, 2018 275 0
रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग अन्तर्गत आठौँ दिन सम्पन्न २ वटा खेलहरुमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र एबिसी स्पोर्ट्स क्लब बिजयी भएका छन् । यो संगै प्रतियोगिताको लिग चरणका सम्पूर्ण खेलहरु समाप्त भएका छन् । समुह ‘ए’ को बिजेताको रुपमा रुपन्देही ११ र उपविजेताको रुपमा त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा समुह ‘बि’ बिजेताको रुपमा धनगढी क्रिकेट एकेडेमी र उपविजेताको रुपमा मध्य-पश्चिम क्रिकेट क्लब सेमीफाइनल प्रवेश गरेका छन् ।
शुक्रबार खेलिने पहिलो सेमीफाइनलमा रुपन्देही ११ र मध्य-पश्चिम क्रिकेट क्लब तथा दोश्रो सेमीफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
पहिलो खेल :-
पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले भेरिगंगा क्रिकेट क्लबलाई ८ विकेटले पराजित गर्यो । टस जितेर ब्याटिंग गरेको भेरीगंगा क्रिकेट क्लबले ढिला सुरु भएका कारण निर्धारित १२ ओभरमा घटाईएको खेलमा ४ विकेट गुमाएर ६३ रन बनाएको थियो । उसको लागि तिलक थापाले सर्वाधिक २० रन , सौगात कार्कीले १८ रन तथा पदम कंडेलले १३ रन योगदान दिए । बलिङ्गतर्फ आर्मीका बलर जितेन्द्र मुखिया, चन्द्र साउद, सागर पुन र साहब आलमले समान १ विकेट हात पारे । ६४ रनको लक्ष्य आर्मीले ७.४ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो । आर्मीको लागि सागर पुन र इन्द्रकमल मानन्धरले समान १७ रन तथा राजु रिजाल र भिम शार्कीले समान १२ रन बनाए। भेरीगंगाका बलर जनादेश चुनाराले २ विकेट लिए ।
दोश्रो खेल :-
आजै सम्पन्न दोश्रो खेलमा एबिसी स्पोर्ट्स क्लबले काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिंग सेन्टरलाई १९ रनले पराजित गर्यो । टस जितेर ब्याटिंग रोजेको एबिसी स्पोर्ट्स क्लबले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६४ रन बनाएको थियो । उसको लागि दिनेश पुनले सर्वाधिक ६९ रन बनाउने क्रममा ४५ बलमा ११ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। यस्तै टेक सलामीले २७ बलमा ४ चौका र ३ छक्का मदतले ३९ रन बनाए । काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिंग सेन्टरका बालार प्रितम थापा र भोज राज भट्टले समान २/२ विकेट लिए । १६५ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिंग सेन्टरले पुरै २० ओभर ब्याटिंग गरे पनि ७ विकेट गुमाएर १४५ रन मात्रै बनाउन सक्यो । उसको लागि बिश्वाश श्रेष्ठले सर्वाधिक ४३ रन बनाउन २८ बलमा ४ छक्का र २ चौका प्रहार गरे। यस्तै दुर्गेश थापाले २३ तथा रोशन शर्माले २० रन योगदान दिए । एबिसीका बलर महेश खत्रीले सर्वाधिक ३ विकेट हात पारे भने दिनेश अधिकारी, युनिश बिक्रम सिंह, बिनित खत्री र रबिन्द्र जंग शाहीले समान १/१ विकेट लिए ।
खेलको प्लेयर अफ द म्याच दिनेश पुन घोषित भए ।
जेठ ३ गते बाट सुरु भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल शनिबार खेलिनेछ । प्रतियोगिताको बिजेताले ३ लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृस्ट खेलाडीले २५ हजार र उत्कृस्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान १०/१० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
Karnali Premier Leaguetribhuwan army club
रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग : रुपन्देही ११ र त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनलमा प्रबेश !!